शेयर कर्जाको सीमा बढ्यो, ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने - ।। Naya Kuro ।।
१३ श्रावण २०७७, मंगलवार ०७:०५ July 28, 2020 Naya KuroLeaveaComment on शेयर कर्जाको सीमा बढ्यो, ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने
तपाईंसँग राम्रो वित्तीय विवरण भएको कुनै पनि कम्पनीको शेयर छ? यदि छ भने शेयर धितोमा राखेर ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साउन २ गते सार्वजनिक गरेको चालू आवको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आज जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार शेयर प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो।
यस्तो व्यवस्था यसअघि ६५ प्रतिशत मात्रै थियो। चालू आवको मौद्रिक नीतिले उक्त सीमालाई पाँच प्रतिशतले बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याएको हो। सो व्यवस्थाले सेयर बजार थप विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ।
एकीकृत निर्देशिका अनुसार कूल १८० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिइने ऋणलाई १२० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सेयर कर्जा प्रतिग्राहक बढीमा ५० लाख रूपैयाँसम्म मात्र दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्टलाई यथावत राख्दै धितो कर्जा, सम्पत्ती कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको सीमा पनि रु ५० लाख बराबर तोकिदिएको छ। यदि कुनै ऋणीले ५० लाखभन्दा बढी दिएको भए २०७९ असार मसान्तभित्र सीमामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। (रासस)
६ कार्तिक २०७७, बिहीबार १२:४८ October 22, 2020 Naya Kuro
औसत कर्मचारीको तुलनामा किन धेरै हुन्छ हाकिमको तलब ?
१२ माघ २०७६, आईतवार १४:२९ January 26, 2020 Naya Kuro
घरपालुवा जनावरबाट कोरोना मानिसमा सर्ने कुनै प्रमाण भेटिएको छैनः डब्ल्यूएचओ
१७ चैत्र २०७६, सोमबार १७:२१ March 30, 2020 Naya Kuro